Iso ibe gi biri | Law & More B.V.
blog » Gị na onye gị na ya bi na Netherlands ebikọ
Gị na onye gị na ya bi na Netherlands ebikọ
''Law & More Ọ na - enyere gị na onye gị na ya na - eme ihe niile nke usoro maka itinye akwụkwọ ikike iji nyere gị aka. ''
Want chọrọ ibi na Netherlands ka gị na onye gị na ya bi? N'ụdị ahụ ị ga-achọ akwụkwọ obibi. Iji tozuo maka obibi obibi, gị na onye gị na ya ga-emekọrịta ọtụtụ ihe. E nwere ọtụtụ izugbe na nkọwapụta ndị akọwapụtara.
Ọtụtụ n'ozuzu chọrọ
Ihe mbụ izugbe chọrọ bụ ka gị na onye gị na ya nwee mkpa inwe akwụkwọ ikike ngafe. Ikwesiri ị dejupụta nkwupụta nke onye otu oge. Nkwupụta a, ị ga-ekwupụta, gụnyere ihe ndị ọzọ, na emeghị mpụ ọ bụla na mpụ gara aga. N'ụfọdụ oge, ị ga-esonye nyocha maka ụkwara nta mgbe ị bịarutere Netherlands. Nke a dabere n'ọnọdụ gị na mba gị. Na mgbakwunye, unu abụọ ga-adịrị afọ iri abụọ na otu ma ọ bụ karịa.
Otu n’ime ihe a choro n’aka bu na onye gi na ya choro inwe ego zuru oke nke onwe ya na nke di ogologo. Ego a ga-enwerịrị opekata mpe hà n ’obere ụgwọ nke obere ego. Mgbe ụfọdụ ego achọrọ ego dị iche na-emetụta, nke a dabere n'ọnọdụ gị. Ọnọdụ a emetụtaghị ma ọ bụrụ na onye gị na ya ga-arụ ọrụ ruru afọ ezumike nká AOW, ọ bụrụ na onye gị na ya ga na-arụ ọrụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ tozuru oke ịrụ ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na onye gị na ya nwere ike imezu ihe achọrọ maka ikere ndị ọrụ.
Ihe ọzọ dị mkpa a chọrọ ka Dutch Immigrashọn na Nlekọta- na Naturalization Service na-elekọta, na-agafe nyocha mpụga obodo na mba ọzọ. Naanị ma ọ bụrụ na ahapụghị gị ilelee ule a, ịgaghị eme nyocha ahụ. Want chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ahapụghị gị n’ule ahụ, ihe ọ ga-efu gị maka iwere udomo ahụ na otu ị ga - esi debanye aha maka udomo oro? Kpọtụrụ anyị maka ozi.
Kedụ ka usoro itinye akwụkwọ n'ọrụ si arụ ọrụ?
Nke mbu, a gha ichikota akwụkwọ na ozi niile achọrọ na nkọwapụta ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ozugbo anakọtara akwụkwọ niile achọrọ, enwere ike itinye akwụkwọ maka akwụkwọ ikike iji nweta obibi.
N'ọtụtụ ọnọdụ, achọrọ visa pụrụ iche iji nwee ike ịga Netherlands wee nọrọ karịa ụbọchị 90. A na-akpọ visa a pụrụ iche Regular Provisional Residence Permit (a mvv). Nke a bụ ihe mmado ga - etinye gị na nnọchite Dutch. O dabere na mba obodo gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ mvv.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mvv, enwere ike itinye akwụkwọ anamachọihe maka ikike obibi na mvv n'otu go. Ọ bụrụ na ịchọghị mvv, enwere ike itinye akwụkwọ maka naanị ikike obibi.
Mgbe itinyechara akwụkwọ anamachọihe a, ndị Dutch Immigrashọn- na Naturalization Service ga-enyocha ma gị na onye gị na ya ga-eme ihe niile achọrọ ma ọ bụ na ị gaghị eru. A ga-eme mkpebi n'ime oge 90.
Nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ kwuo banyere edemede a?
Biko nweela onwe gị ịkpọtụrụ mr. Maxim Hodak, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] ma obu mr. Tom Meevis, onye ọka iwu na Law & More via [email protected] You nwekwara ike ịkpọ anyị na ekwentị ekwentị ndị a: +31 (0) 40-3690680.
Previous Post Ikike nke ndị na-eketa òkè na Netherlands
Next Post Nkọwa ego ego Dutch na mgbochi mgbochi mmebi ego nke ndị omekome kọwara